काठमाडौं, ११ असार । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको कम्युनिस्ट पार्टीले मंगलबार घोषणा गरेको नेपाल बन्द सफल भएको दावी गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ ।
विप्लवको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमा सवारी नचलाएर आफूहरुलाई सहयोग गरेको ठहर छ । साथै वर्तमान सरकारलाई ‘केपी–पिके सरकार’को संज्ञा दिँदै यसविरुद्ध राष्ट्रघात, जनघातमा अघिल्ला सरकारलाई नै उछिनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याप्रति पनि विप्लव समूहले आपत्ति जनाएको छ । विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई गत असार ५ गते प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिएको बताएको थियो ।
विप्लवले भने सोही घटनाको विरोध स्वरुप हिजाे नेपाल बन्द घोषणा गरिएको बताएको थियो । साथै विप्लवले विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रघाती शक्तिका विरुद्ध कम्युनिस्ट, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता गर्दै संघर्ष गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।
२०७६ असार ११ बुधबार ०९:१०:०० मा प्रकाशित
मुुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौँ, ६ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । प्रहरी
‘सबै दलबीच मेलमिलाप आवश्यक’
दमौली, ६ साउन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले बिपीको सम्मान गर्ने हो भने पार्टीभित्र र अन्य दलबीच आपसी मेलमिलाप आवश्यक रहेको
एउटै जिल्लामा नेकपाको सहइन्चार्ज कति ? फुटबल खेल्ने टीम जति !
काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले हिजो मात्रै जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याएको छ । नेकपाले उक्त सूची सार्वजनिक
यी मन्त्रीः जसले छाडेनन् इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि
काठमाडाैं, ६ साउन । सत्तारूढ दल नेकपाले सङ्घीय सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई समेत जिल्ला इन्चार्ज तथा